पक्राउ परेका पत्रकार चन्दलाई झुन्ड्याइ देउ प्रचण्ड कामरेड: पुर्ब बटालियन कमाण्डर ‘टाइगर’ « Postpati – News For All
पक्राउ परेका पत्रकार चन्दलाई झुन्ड्याइ देउ प्रचण्ड कामरेड: पुर्ब बटालियन कमाण्डर ‘टाइगर’
आदरणीय प्रचण्ड कामरेड अभिवादन ।
जनयुद्दको उद्गम थलो रोल्पाबाट तपाइलाई आज एउटा पत्र कोर्दै छु । सर्वप्रथम मेरो परिचय तपाई समक्ष राख्न चाहान्छु ।
मेरो नाम टिकाराम वली हो । जनयुद्द बेला मलाई पार्टीले ‘क. टाइगर’ उपनाम दिएको थियो । २०५४ सालमा म भूमिगत भएको थिए । भूमिगत हुँदा देखिनै जनमिलिसियामा भर्ति भएको थिए । अर्थात जनयुद्दको सिपाही हुँदा नै जनमुक्ति सेना बनेको हुँ । युद्द्का बिभिन्न मोर्चाहरु गरि ५२ वटा लडाईका मोर्चामा प्रत्यक्ष सहभागी भएको छु ।
पाँचौ ब्रिगेड अन्तर्गत स्पेसल टाक्स फोर्स १ नम्बर बटालियन कमान्डर थिए ‘म’ ।
अहिले म घाइते पनि छु । सल्यान श्रीगनर लडाईमा टाउकोमा गोलि लागेको थियो । अझै त्यही गोलि बोकेर मृत्यु पर्खेर बसिरहेको छु । टाउको बाट गोलि झिक्न नमिल्ने अबस्थामा छु । सेना समायोजन हुँदा अवकासप्राप्त गरि, वाइसिएलको जिम्मेवारी लिएको थिए ।
जनयुद्दका महान योद्दा किम बहादुर थापा ‘सुनिल’ कामरेडको सहादत भएको रोल्पा जिनाबाङको मनिमारे नजिकै मेरो घर छ । सिङ्गो जनयुद्दलाई पाल्ने कामरेड किरण अर्थात भर्खरै पक्राउ परेका गोपाल चन्दको घर पनि त्यहि नजिकै छ । पत्रकार गोपाल चन्दका बाबा हुन् कामरेड किरण ।
यत्ति परिचय दिएपछि सायद तपाईले मलाई चिन्नु भयो होला ।
अहिले मेरो हालत कस्तो छ र हिजोको मेरो इतिहास के थियो भन्ने बारे आगामी दिनमा विस्तार गरौला । खासै म मिडियाबाजी गर्दै हिड्ने मान्छे पनि हैन ।
पत्रकार गोपाल चन्द तपाईको गृहमन्न्त्री राम बहादुर थापा बादलको आदेशमा प्रकाउ भएको खबर पाए पछी मुख खोल्नै पर्ने भयो । तिनै प्रकाउ परेका पत्रकार गोपाल चन्द र उनको परिवारले जनयुद्दमा गरेको त्याग तपस्या बारे अबगत गराउन चाहान्छु ।
एउटा उखान छ, जुन थालीमा खाना खाइयो त्यही थालीमा दिशा गर्ने मानिसको अहंकारी प्रवृति हो । ठ्याक्कै त्यही प्रवृति तपाईमा देखेर, तिनै सिंगो जनयुद्दलाई सेल्टर दिने परिवारको सदस्यलाई आज सत्तामा पुगिसके पछी हत्कडी भिराई जेलनेल गरेको देख्दा म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।
हिजो संकटकालमा तपाईले तिनै पत्रकार गोपाल चन्दको घरमा सेल्टर लिनु भएको थियो । त्यहि घर परिवारको परिचय गराउन चाहान्छु ।
रोल्पा जिल्लाको तत्कालिन जिनाबाङ गाबिस अहिले गंगादेव गाउपालिका ३ पर्छ । सल्यान गुराँसे बस्ति संग जोडिएको झ्याम डाँडा छ । जुन ठाउमा जनयुद्दका कैयौ मोर्चा सम्हाल्दा तपाईले धेरै पटक त्यो ठाउँमा सेल्टर ल्याएर बस्नु भएको पनि हो।
तपाईलाइ अबगत हुनुपर्छ, तत्कालिन शाहीसेनाले सल्यान गुराँसेको भिडन्त पछी, गुराँसेको सम्पूर्ण बस्ति जलाएर खरानी बनाएको थियो । जुन बेला म पनि प्रत्यक्ष गुराँसे लडाईमा थिए । त्यहि नजिकै झ्याम डाँडामा चुडामणि ओली कामरेड आदर्शको घर छ ।
तिनै कामरेड आदर्शको घर देखि तल झारमंग्रा भन्ने ठाउँ छ, जहाँ माहुरीका घारहरुले घेरिएका स-साना झुप्राहरु छन, त्यहाँ प्राकृतिक माहुरी पालन हुन्छ किन कि बाह्र जथाकको घना जंगल भएको हुँदा माहुरी पालन सजिलो भएको हो । त्यहि ठाउँमा क्षेत्र बहादुर चन्द कामरेड ‘किरण’को सानो झुपडी थियो, अहिले पनि छ ।
त्यहि झुपडीमा केवल ४ जनाको सानो परिवार थियो । कामरेड किरण, उहाँको धर्मपत्नी र साना दुइजना बालबालिका ।
तिनै बालबालिका मध्यका छोरा हुन गोपाल चन्द । उनकी बहिनि गीता चन्द हुन । उनीहरु अहिले जवान भएका छन् ।
तपाई अहिले राजधानीमा ब्यापारी ठेकेदारको घरमा घांटी जोडेर मार्सी भात खानु हुन्छ । उनीहरुलाई खानलाउनलाई अझै धौ-धौ (समस्या) पर्छ तर जेनतेन काठमाडौंमै पढ्दैछन् ।
भक्तपुरमा बसेर तिनै संघर्ष गरिरहेका गोपाल चन्द जनपक्षीय पत्रकारिता गर्छन । सायद नेताहरुको पक्षमा नलेख्नु अर्थात सिहदरबारको पक्षमा कलम नचलाउनु, अझ भनौ कामरेड प्रचण्डको पक्षमा कलम नचलाउनु उनको महागल्ति हो । तिनै जनायुद्दमा त्याग तपस्या गरेका बालक अहिले प्रचण्ड कामरेडको समाचार लेख्दा हत्कडी भिरेर हिरासतमा छन् ।
जतिबेला उनको घर सिंगो जनयुद्दको सेल्टर थियो । त्यहि बेला उनका मामा खकेन्द्र ओली जनयुद्दमै सहिद भएका थिए । कपुरकोटको लडाईमा आफ्नै कान्छा मामाको सहादत भयो ।
आफ्नो घर सेल्टर दिएर जनयुद्दको रक्षा गर्ने त्यहि परिवारको सदस्यलाई जेलमा कोच्नु भएछ । सकिन्छ भने अब झुन्ड्याई दिनु होला ! हिजो कलम चलाएकै भरमा इक्छुक पनि मारिएका थिए ।
त्यहि तपाइलाई सेल्टर दिएर बचाउने परिवारको बारे बुझाउन चाहान्छु ।
जब जनयुद्द सुरु भयो, प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताले जनयुद्द सिध्याउन हरेक तानावाना बुने । त्यहि बेला जनयुद्दका केन्द्रिय नेता देखि सामान्य कार्यकर्ता सम्मलाई सेल्टर दिएर संरक्षण दिने घर परिवार मध्ये रोल्पाको चन्द परिवार पनि एक हो । नपत्याए त्यहाँको समाजलाई गएर सोध्नु होला, समाजले देखेको कुरा बताई दिने छ ।
उनको घरमा प्रचण्ड २०५६/५७ सालतिर सेल्टर लिएर पनि बस्नु भएको थियो । बाबुराम, पोष्ट बहादुर बोगटी देखि जनयुद्धका चर्चित नेताहरुले सेल्टर नलिएको सायदै कोहि नहोलान । एक पटक होइन पटकपटक !
हालका मन्त्रि बर्षमान पुनका श्रीमती तथा पुर्व सभामुख ओनसरी घर्ति ‘उषा’सुत्केरी हुँदा चन्द परिवारले नै संरक्षण गरेर राखेको थियो । आफ्नो छोरी जन्मिदा २०५५/५६ सालमा सुत्केरी ओनसरी घर्तीलाई छोरी बुहारी बनाएर लालनपालन गरेको हो पत्रकार गोपाल चन्द परिवारले ।
उनकी छोरी सायद अहिले ठुली भइन होली । तिनैलाई पिठ्यूँमा बोकेर सम्हाल्ने पहिलो दाजु तिनै गोपाल चन्द हुन । म त भन्छु जन्मदा गोधमा बोकेर माया दिने दाजु गोपाल चन्दलाई भेटेर छोरीले आशीर्वाद ग्रहण गरे, जीवन मार्गमा सकारात्मक सोच पलाउने छ ।
ओनसरी घर्ति ज्युले सुत्केरी हुँदा चन्दको घरमा कयौं रातहरु गुजारेकी थिइन् । प्रहरी आउदा उनको नावालिकालाई सुरक्षा दिएर ओनसरी घर्तिलाई जंगल भगाएर सुरक्षा गरेका दृश्यहरु ताजै छन्, त्यहाँको जनता जनार्दनलाई थाहा छ । सायद यो गुणलाई ओनसरी घर्तीले कसरि बुझ्नु भएको छ उहालाई थाहा होला, कित मन्त्रि बर्षमान पुनलाई थाहा होला ।
जब म २०५८ फागुन ६ गते सल्यान श्रीनगर प्रहरी चौकी रेड गर्दा घाइते भए । तव ६ महिना सम्म तीनै पत्रकार गोपाल चन्दको घरमा सेल्टर लिएर बसेको थिए ।
मलाई ६ महिना सम्म परिवारले सेवा गरेको मैले बिर्सेको छैन । गोलिले लागेर छटपटाई रहेका मेरा घाउहरुमा मलम पट्टि लगाई दिने जनयुद्दको घर थियो । म मात्र होइन म जस्ता कैयौ घाइते अपांगलाई संरक्षण सुरक्षा र सेवा दिएको छ उनको घरपरिवारले ।
२०५७ सालमा उपक्षेत्रीय ब्युरोको वैठक वस्ने कतै पनि सेलटर नपाउदा तिनै गोपाल चन्दको घरमा बैठक बसेको थियो । जुन बेला प्रहरी प्रसासन तथा सुराकीहरुको बिगबिगी थियो ।
नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सेल्टर दिएको शाहीसेनाले थाहा पाउदा २०५७ मै सल्यान जिल्लाबाट आएको शाहीसेनाको टोलीले उनको घर आगो लगाई दिएको थियो । जुन बेला ५०० भन्दा धेरै नेता तथा कार्यकर्ता उनको घरमा सेल्टर लिएर बसेका थिए । साहीसेनाले थाहा पाएपछि उक्त घरमा आउदा सबै जङ्गल भागेर बचेका थिए तर तिनै ७/८ बर्षका नाबालक गोपाल चन्दले साहासी पुर्वक आगो लागिरहेको आफ्नो घरलाई पानी हालेर बचाएका थिए ।
जुनबेला उनि र बहिनि गीता चन्द मात्रै घरमा थिए । शाहीसेनाले आगो लगाउदा जलेको घरको निसानी अझै भेट्न सकिन्छ ।
यसरि समग्र जनयुद्द र जनयुद्दका नेता, कार्यकर्ता, घाइते सेना, जनयुद्दका सुत्केरीहरुलाई सेल्टर दिएर सिंगो जनयुद्दको रक्षा गर्ने उनको पुरानो घर उस्तै यथावत छ, अझै फेरिएको छैन । बरु थोत्रिएको छ ।
प्रचण्ड कामरेडको महल छ तर उनको परिवार अझै उही पुरानो थोत्रिएको घरमा बास छ ।
अब भन्नुहोस कामरेड…
आखिर युद्दमा सर्वस्व गुमाएर के पायो त्यो परिवारले ?
उनका बाबा छेत्र बहादुर चन्द ‘किरण’ २०४८ साल देखि राजनीतिमा लागेका थिए । २०५४ साल देखि प्युठानमा सरुवा भएर वाहिर जिल्लामै १० बर्षे राजनीतिक जीवन गुजारे ।
आदरणीय कामरेड प्रचन्ड ।
पत्रकार गोपाल चन्दको परिवारले जनयुद्दलाई दिएको त्याग तपस्या र योगदानको बखान जति गर्यो उति कम हुन्छ । उनको परिवारले जनयुद्दको लागि कति त्याग र समर्पण गर्यो भन्ने कुरा उनको घर वरिपरि रहेको समाजले बताउने छ ।
वास्तवमा तपाईको नेतृत्वको जनयुद्दलाई जोगाउन अहोरात्र त्याग तपस्या गरेर, जनयुद्दलाई सुरक्षित राजधानीमा अवतरण गराउने परिवार मध्ये चन्द परिवार पनि एक हो । फलस्वरुप आज सम्म आउदा तपाई सिङ्गो देशको दुई/दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । छोरीलाई चितवनमा मेयर बनाउनु भयो । बुहारी बिना मगरलाई खानेपानी मन्त्रि बनाउनु भयो । तर जनयुद्दको सेल्टर घरले के पायो ? जेल र नेल हैन ?
अहिले दुइतिहाइ बहुमतको सरकार र पार्टीको अध्यक्षमा विराजमान गराउन यो परिवारको अहम भूमिका थियो तर तिनै परिवारको सदस्य पत्रकार गोपाल चन्दले तपाईको बारे समाचार साभार गरेर लेख्दा किन जेल हाल्नु भयो ?
उनको घरपरिवारलाई एकपटक हेर्नु होला । कुन दुख र संघर्ष गरेर जिबिका उपार्जन गर्दैछन । कामरेड किरणले जनयुद्दको जर्जरपूर्ण अवस्थालाई छिचोल्दै, छोरा गोपाल चन्दलाई गाउँकै सामान्य स्कुलमा पढाएर १० कक्षा पास गराए । अहिले काठमाडौंमा जसोतसो दुखगरी अध्यन गर्दैछन । उनि संग रोजगार छैन । बेरोजगार युवा काठमाडौंमा बसेर पढ्न कति कठिन छ । त्यो सबै भन्दा तपाइलाई नै थाहा छ ।
तिनै पत्रकार गोपाल चन्दलाई समाचार लेखेको आरोपमा हिरासतमा हाल्नुपर्ने तपाइको कुन नैतिकता हो कामरेड ?
सत्ता, शक्ति र पावर आफ्नो हातमा आएपछि सिङ्गो जनयुद्दलाइ संरक्षण दिने परिवारमाथि नै जेलनेल गर्ने कुन नैतिकताले तपाईलाई दियो ?
म अहिले पनि टाउकोमा गोलि बोकेर मृत्युलाई पर्खेर बसेको छु । मैले विभिन्न मोर्चामा गरि ५२ वटा लडाईमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको छु । खासगरि अहिले सम्म तपाइँ बारे ‘म’ मौनतामा थिए । मिडियाबाजी गरेर कहि कतै बोलिन । बरु हजुरको राज्य सत्तालाई मौनताको पर्दापछाडिबाट चुपचाप नियालेर हेरिरहे ।
तपाईमाथि के के प्रहार प्रयास भए भन्ने विषय सत्य छ भन्ने कुरा म जगजाहेर गर्न चाहान्छु. त्यो कसरि भने…?
तपाईको जनयुद्दको जिबन शैली बारे म नजिकबाट जानकार छु । किन कि कैयौ पटक तपाइको सुरक्षाको लागि घेरादिएर अहोरात्र कालारातहरु कटाएको सिपाही हु । म मर्न चाहेर पनि तपाइलाई बचाउन एकमुठी प्राणलाई हत्केलामा राखेर मृत्यु संग सौदाबाजी गरेको छु ।
रोल्पामा सिस्नो ढिडो खाएर बाँचेको तपाइको जिन्दगि हो । कठोर संघर्ष गरेर जनयुद्दको नेतृत्व गरेको योद्दा हो ।
तर तपाईको आजको जिबन शैली पनि मैले गज्जबले नियाली रहेको छु । मैले मात्र होइन दुनियाले नियाली रहेको छ । म जस्ता जनमुक्ति सेनाहरुलाई बेचेर तपाईले खाएकै हो । १७ हजार शहिदको रगतको अवमूल्यन तपाईले गरेकै हो । जनयुद्द प्रति घात भएकै हो । यत्ति भन्न नपाउने ?
फलस्वरूप पदम कुवरले तपाइको देब्रेगालामा झापट दिएको दुनियाँ जानकार छ । तपाई माथि धारेहातहरु कैयौ पटक प्रहार भैरहेका छन् ।
त्यसकारण म भन्छु, अब प्रचण्डलाई के के प्रहार हुन्छन त्यो सामान्य कुरा हो । यो सब तपाइको आजको जिबन शैलीले निम्त्याएका घटना परिघटनाहरु हुन् ।
आज ‘प्रचण्ड माथि पुर्ब कार्यकर्ताले के के प्रहार प्रयास गरे’ भन्ने समाचार कतै बाट साभार गर्दा जनयुद्द बचाई राख्ने परिवारको पत्रकार गोपाल चन्दलाई हिरासतमा राख्नु भयो । यसको परिणाम भयानक हुन सक्छ ।
जेलनेलले कमल रोकिदैन ! आस्थाहरु कहिलै मर्दैनन ! यो त तपाइले सिकाएको रक्तबीज हो । बरु समाचार लेख्दैमा गोपालहरुलाई झुण्ड्याउनु होस् । गद्दारीको हिसाव किताव खोज्न सयौ गोपालहरु जन्मिने छन ।
अन्तरमा यो देशमा कानुन भन्ने चिज छ कि छैन । समाचार प्रसारण गर्नु झुटो थियो भने पनि कानुन र प्रक्रिया अन्तर्गत सजाय दिने ब्यबस्थामाथि किन ठाडो हस्क्षेप गर्दैछ तपाईको गृहमन्त्रालय ?
बादलको निर्देशनमा नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर किन गिरफ्तार गराउनु भयो ? के गोपाल राष्ट्रघाती, नदीनाला बेच्ने अपराधि हुन् ? कि निर्मला पन्तको हत्यामा सामेल छन् ?
निर्मलाको न्याय दिन निदाउने तपाईको प्रसासकले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई किन पक्राउ गर्यो ? कम्युनिष्ट सरकार द्वारा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि किन अंकुश लगाउने काम भयो ? प्रचण्ड कामरेडले संबिधानमा लेखिएको कानुनलाई किन दुरुपयोग गर्नु भयो ?
पत्रकारको मुद्दा हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छदैछ, उक्त प्रक्रिया मिचेर सिधै प्रहरीद्वारा गिरफ्तारगरि हत्कडी सहित हिरासतमा राख्ने अधिकार तपाईको कुन कानुनको पानामा उल्लेख छ ?
सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्न तपाईलाई कसरि छुट भयो ? यो कुरापनि यादराख्नु होला ! निरंकुशताको पराकाष्ठाले तपाईकै गलपासो हुने निश्चित छ । बेलैमा चेतना भया …..
उही पुर्ब जनमुक्ति सेना नेपाल,. बटालियन कमान्डर ‘टाइगर’